Umatshini weZirconia Disc-News-VSmile Co., ltd
Umatshini weZirconia Disc
Ixesha: 2021-06-03 I ngxelo:15
Njengothengiso olukhokelayo lwe-zirconia zamazinyo, thina'Ndithethile namakhulu omnini webhu yamazinyo kunyaka ophelileyo, kwaye loo ncoko inkulu isinika ukuqonda okuninzi ukuphucula imveliso yethu, ikwasinika namava axabisekileyo endlela yokwenza imveliso ye-zirconia, thina'ndithanda ukwabelana nani nonke bantu.
Kukho imigaqo esisiseko emine ekufuneka ilandelwe xa kusenziwa umatshini Vsimle zamazinyo Zirconidiski: isantya esicothayo, amaxabiso aphezulu esondlo, ukunyuka ukusika kunye nokupholisa isikhukula.
I-Zirconia ithanda ukuhambelana kwaye ihambelane nezixhobo zokusika kunye neentsimbi. Ikwasebenza ukusebenza nzima, ifuna ngaphezulu kwee-engile ezisemthethweni zokucoca kwizixhobo zokusika ukungena kumhlaba owomeleleyo womsebenzi kwaye usike i-chip erhabaxa ecocekileyo. I-12 ukuya kwi-15 yesidanga se-radial rake entle igqibezela umphezulu wobomi kunye nesixhobo sobomi.
Ukusika amaxabiso ae. Kuba kusetyenziswa izixhobo zokusika ezincinci kusetyenziswa inyathelo elincinci ngaphezulu kwamaxabiso asetyenzisiweyo, iitshipsi ezincinci ziyenziwe ke ngoko iRadial Chip Thinning uhlengahlengiso kufuneka lwenziwe ukunciphisa amanqanaba ukunqanda ukunxiba izixhobo kakhulu, ukugqiba okungagqibekanga kunye nemida esikiweyo- sesinye isizathu sokupholisa isikhukula njengobushushu obuvelisiweyo yinkqubo yoomatshini ngokwesiqhelo ayigqithiselwanga kwi-chip (nokuba kungenxa yokutya okungafanelekanga / isantya okanye inyani yokuba i-zirconia sisixhobo esihle sokwambathisa) kodwa endaweni yoko ihlala kwisixhobo sokusika esihlala sinyongo kwisixhobo sokusika kunye neendawo zokunceda.
Ngenxa yobukrakra bayo, oomatshini abanzima be-Harding kunye ne-fixtting banika iziphumo ezilungileyo kwaye kubalulekile ukugcina ukungaphazanyiswa, umthwalo oqhubekayo, ukunyuka okusikiweyo xa kusenziwa umatshini.
I-machining "slurry" ehambelana nomatshini owomileyo we-zirconia intle kakhulu, ibangela kwaye irhabaxa kakhulu. Nokuba kungacocwa njani, kwaye kunzima kakhulu ukugcina uthuli lungangeni kwindawo yomatshini (iibhola, iindlela, iindlela zothutho, iindawo ezibiyelweyo zombane, njlnjl.). Oku kungena kuya kukhokelela kunxibo lwangaphambi kwexesha kumatshini obalulekileyo kwaye kwiimeko ezininzi kuyabaleka indawo evalelweyo yoomatshini kwaye kuqokelela kwindawo yokusebenza.
Kukho nengxolo kunye neendleko ezongeziweyo kunye nolondolozo olunxulunyaniswa neefilitha kunye neenkqubo zokucoca.
Kuba i-zirconia ithambekele kwinyongo, akufuneki ishiywe ukuba yome kwaye iqokelele kumatshini womatshini wentsimbi ixesha elide. Ukuhlanjwa ngamaxesha athile kwegumbi lokuchwetheza lomatshini kusetyenziswa ityhubhu eqhotyoshelwe kumbhobho opholileyo ngelixa ukusebenzisa impompo yesipholisi yindlela ekhawulezayo kwaye elula yokufeza oku. Kwakhona, ukudubula okukhawulezayo ngesicoci somphunga esingabizi mali ininzi “kwigumbi” lokuchwetheza ngamathuba athile kuya kuyigcina indawo ibonakala ikhazimla kwaye intsha. Yonke le nkqubo ithatha malunga nemizuzu emi-5 okanye njalo.
Amanzi adibeneyo alungele ukusetyenziswa. Siyisebenzisela zombini i-zirconia kunye neglasi-iseramikhi. Ubomi besixhobo esandisiweyo bunokufunyanwa ngokusebenzisa igrisi. Okwangoku sivavanya isinyibilikisi samanzi, into engenasipholisi eshiyekileyo ebonakala ithembisa. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili i-lubricant eseleyo kwi-zirconia okanye iglasi-ceramics konke kubi.
Ukuxovula okumanzi kuyongeza elinye inyathelo lokuhamba kokuhamba komsebenzi njengoko iiyunithi ezinomswakama oshiyekileyo zinokuqhekeka kwaye zenze imibala yombala ibonakale ikhaphukhaphu.
I-oveni engabizi mali ingako isebenza kakuhle. Amaxesha okomisa ayahluka. Bona ngezantsi.
Ongatshatanga (70 ° C)): imizuzu eli-15 +
Ongatshatanga (140 ° C)): 5-10 imizuzu
Iiyunithi ezi-2-4 (70 ° C): imizuzu engama-40 +
Iiyunithi ezi-2-4 (140 ° C): imizuzu engama-25 +
Iiyunithi ezingama-5 + (70 ° C): imizuzu engama-50 +
Iiyunithi ezingama-5 + (140 °): imizuzu engama-25 +
Abathengi bethu bafumene ukucocwa komatshini (ekufuneka kwenziwe njalo), ukutshintshisa okupholileyo (ukuba kukho imfuneko) kunye nokomisa kufanelekile ngenxa yokunyuka kwesixhobo, iindleko zokusebenza eziphantsi, amanqanaba engxolo asezantsi, indawo yokusebenza ecocekileyo, ubomi bomatshini obandisiweyo, ngaphezulu umgangatho kunye neeyunithi zobugcisa.
I-PREV: Inkqubo yeVsmile ePhambili: iZirconia yamazinyo
OKULANDELAYO : 3, 4, 5 AXIS Machine Mental Milling
I-Vsmile Milling Burs i-Wieland ® iMini iyahambelana